Mpamorona ny 'The Watchmen' Alan Moore 'The Show' dia Mindbender tanteraka ary mitodika any amin'ny Blu-Ray - iHorror
Home Blu Rays Mpamorona ny 'The Watchmen' Alan Moore 'The Show' dia Mindbender tanteraka ary mitodika any amin'ny Blu-Ray
Mpamorona ny 'The Watchmen' Alan Moore 'The Show' dia Mindbender tanteraka ary mitodika any amin'ny Blu-Ray
Nanana anay tao amin'ny Alan Moore ianao
by Trey Hilburn III Septambra 13, 2021 338 hevitra
Ny mpitily dia iray amin'ireo tantara an-tsary tsara indrindra nosoratana. Sangan'asa feno izy ireo. Ireo boky fanaraha-maso izay mankany amin'ny HBO's Ny mpitily andian-dahatsoratra dia nahay tamin'ny fandreseny tamin'ny fomba izay saika ny ankamaroany no naka ny atiny voalohany. Ankehitriny, manam-pahaizana amin'izao androntsika izao, Alan Moore dia manana sarimihetsika vaovao an-dalana antsoina hoe, The Show. Jery ​​todika ity teaser ity ary ianao dia hiondrana an-tsambo miaraka amin'ny tontolo neon hafahafa hafahafa miandry anao.
Ny synopsis ho an'ny The Show mandeha toy izao:
Fletcher Dennis (Burke), lehilahy manan-talenta maro, pasipaoro ary mombamomba azy, tonga tao Northampton - tanàna hafahafa sy manenjika any afovoan'i Angletera izay mampidi-doza toa azy. Tamin'ny iraka hitadiavana artifact nangalarina ho an'ny mpanjifany mandrahona, dia voahidy anaty tontolo maizimaizina feno vampira, hatsaran-tarehy matory, jiolahim-boto Voodoo, maso tsy miankina ary mpamaly faty misaron-tava i Fletcher. Milentika haingana any anaty lavaka mainty hafahafa sy mahatsiravina izy, izay miafina ao ambanin'ity tanàna toa mangina ity. Vetivety dia tsikaritr'i Fletcher fa manjavozavo ny nofy sy ny zava-misy ary mety tsy hisy intsony ny tontolo tena hiverina… Miarahaba antsika amin'ny The Show.
Ny Mitch Jenkins no nitantana The Show flick iray hafa tanteraka. Feno ny lafiny hafahafa an'i Moore, ary iray amin'ireo horonantsary mangataka ny ho hita vetivety.
Ireo fiasa manokana ho an'ny Ny Show's Blu-ray ho avy dia misy tranofiara, "Asehoy ireo sarimihetsika fohy tany am-boalohany" ary "Tongasoa eto amin'ny Feature featurette," izay misy resadresaka manokana miaraka amin'i Alan Moore sy Mitch Jenkins.
The Show tonga amin'ny blu-ray manomboka ny 23 Novambra ary amin'ny nomerika ary amin'ny On Demand manomboka ny 5 Oktobra.
Mpankafy Alan Moore ve ianao? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.